» मेयर महतको बोलीको ठेगान भएन : उहिले बाइपास, अहिले २५ मिटर विस्तार !
मेयर महतको बोलीको ठेगान भएन : उहिले बाइपास, अहिले २५ मिटर विस्तार !
२०७६ असार २९,आईतवार ०९:४२
मकवानपुर २९ असार । पूर्वपश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ अन्तरगत हेटौँडा बजार क्षेत्रमा पर्ने सडक विस्तारको विषयमा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरीबहादुर महतले एकाएक बोली फेर्न थालेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन अघि हेटौँडामा २५ मिटर सडक विस्तार नगरी बाइपास गरेर लैजानपर्ने भन्दै घोषणापत्रमानै सार्वजनिक गरेरका महतले निर्वाचित भइसकेपछि भने २५ मिटर सडक विस्तार हुनैपर्ने दावी गर्दै आएका छन् ।
मेयर महतले स्थानीय तहको निर्वाचन अघि घोषणापत्रमानै २५ मिटर सडक विस्तार गर्न नहुने उल्लेख गरेका थिए । उनले भिडियो अन्तरवार्तामा भनेका थिए ‘ संसारमै यस्तो अभ्यास छैन, की मध्ये बजारबाट हाइवे लैजाने, हामीले बाइपासबाट हाइवे लान सरकारसग प्रयास गर्नेछौँ ।’
बाइपासको लागि पर्याप्त ठाँउ पनि छ, त्यसो गर्दा खास मुआब्जा दिन पनि पर्दैन, हाम्रो घोषणापत्रमा पनि त्यही छ । उनी त्यही घोषणापत्र देखाएर निर्वाचित भए । ‘हेटौँडाको बजारभित्र हाइवे हुँदैन’ – उनले भनेका थिए ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पछी हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरीबोल महतले कुनैपनि हालतमा २५ मिटर सडक विस्तार हुनैपर्ने दावी गरेका छन् । उनले हेटौँडा बजार भत्काउन सरकारले नसके आफुलाई जिम्मेवारी दिए हुने भन्दै केही समयअघि होटल प्रकाशमा भएको कार्यक्रममा भाषण गरेका थिए ।
उनले २५ मिटर सडक विस्तार हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पत्र समेत पठाएका थिए ।
मउवा संघ अध्यक्ष कटुवालको धारणा यस्तो
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण कटुवालले हेटौँडामा २५ मिटर नभई १६ मिटरमात्रै सडक विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । अदालतले घर नभत्काउनु भनेर स्टे अर्डर दिएको छ, अब की कानूनभन्दा हामी माथि हौँ भनेर भत्काउनु पर्यो, की मिलाएर लैजान पर्यो – उनले भने ।
सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने तरिकाले गर्ने हो भने, १६ मिटर विस्तार गरौँ, सडक पनि विस्तार हुन्छ, मुआब्जा पनि चाँहीदैन । उनले भने ।
उनले आफुहरु १६ मिटरमात्रै विस्तार गर्ने अभियानमा लागेको बताए ।
२५ मिटर प्रकरण : चल्यो डोजर, रोकिएन सडक विस्तारको काम
जब वर्षामा टहरा भत्काउन डिभिजन सडकको डोजर लोथर पुग्यो
२५ मिटर सडक विस्तारको विषयमा आनन्द पराजुलीले भने : विनाश नभई विकास हुँदैन
अपडेट : २५ मिटर सडक विस्तार बुधबारसम्मको लागि स्थगित
१६ मिटर होइन २५ मिटरनै भत्काउनुपर्छ : छिन्तु, सचिव नेकपा मकवानपुर
२५ मिटर सडक विस्तार प्रकरण : आवश्यक तयारी सकियो, १० बजेबाट भत्काइन्छ संरचना
२५ मिटर सडक विस्तार प्रकरण : भोलि लोथरबाट डोजर चल्ने
१६ मिटर मात्रै फराकिलो पार्ने कुरामा हाम्रो समर्थन : इन्द्र बानियाँ
प्र.म.ओली, नेता प्रचण्ड र शेरबहादुर देउबा पनि घर भत्काउन नहुने पक्षमा : पौडेल
१६ मिटर नि भत्काउने थिइनँ, प्रेसर भएर निर्णय गरेको हो : मुख्यमन्त्री पौडेल
मलाई विकास विरोधी भनेँ, पहिला मेरै घर भत्काउँछु – मुख्यमन्त्री पौडेल